Sidee Ayay Noqon Doontaa Shaxda Chelsea Haddii Blues Ay Ku Guuleysato Saxeexa Coutinho? - Gool24.Net
Sidee Ayay Noqon Doontaa Shaxda Chelsea Haddii Blues Ay Ku Guuleysato Saxeexa Coutinho?
Barcelona ayaa la sheegay inay Chelsea u bandhigtay inay laseexato laacibka reer Brazil ee Philippe Coutinho xagaagan, kaddib muddo uu Camp Nou la qabsan waayey iyo amaah aan guuleysanin oo uu ku tegay Bayern Munich oo soo dhamaanaysa xagaaga.
Blues ayaa la sheegay inay xiisaynayso kubbad-sameeyaha reer Brazil, laakiin warbaahinta Ingiriiska qaarkeed ayaa qorshaha Frank Lampard ee Coutinho ku tilmaantay in kaliya uu yahay mid amaah ah oo aanu waqtigan diyaar u ahayn inuu bixiyo £142 milyan oo Gini oo ay Barcelona doonayso in lagaga iibsado.
Chelsea oo bishii January iibsatay xiddiga kooxda Ajax, soona gaadhi doona London xagaaga soo socda, waxa Lampard uu rabaa inuu dhiso koox adag oo ku tartami karta horyaalka Premier League, kana soo kaban karta niyad-jabka ka haystay Champions League sannadihii ugu dambeeyey.
Haddaba, sidee ayay noqon doontaa shaxda kooxda Chelsea haddii uu Philippe Coutinho yimaaddo xagaaga?
Tababare Lampard waxa uu door bidaa shax ku dhisan afar difaac, saddex dhex ah iyo saddex weerar ah, waxaana goolka u hayn doona Kepa Arrizabalaga maadaana uu Willy Caballero duqoobay oo aanu lahayn tayo uu ku noqon karayo doorashada koowaad ee Blues.
Da’yarka layaabka leh ee Reece James ayaa u diyaarsan inuu booska midig ka cidhiidhsado cid walba oo halkaas hadda joogta, sida Azpilicueta oo isla markii uu kasoo laabtay amaahdii uu ugu maqnaa Wigan uu tartan kula galay booskaas, inkasta oo halyeyga reer Spain mararka qaarkood dhinaca bidix loo diray.
Chelsea waxa kale oo la sheegayaa inay raadinayso Ben Chilwell oo Leicester City oo afarta dambe ee difaaca la dhamaystiri doona Antonio Rudiger iyo Kurt Zouma.
Haddii saxeexa Coutinho ay Blus ku guuleysato, waxa kale oo isbeddel ku iman doonaa khadka dhexe ee Chelsea, waxaana cudud adag noqon doona N’Golo Kante oo lama taabtaan ah, Mateo Kovacic iyo Philippe Coutinho oo saddexayn doonta, iyadoo laacibka Talyaaniga ah ee Jorginho lala xidhiidhinayo bixitaan.
Weerarka waxa muran la’aan iska yeelanaya da’yarka Tommy Abraham, waxaana garbaha ka caawin doona saxeexa cusub ee Hakim Ziyech oo £36 milyan ay Ajax kaga soo iibsatay, waxaanu booska kala bixi doonaa ruug-caddaaga reer Brazil ee Willian oo qandaraaskiisu dhamaanayo xagaaga soo socda.
Dhinaca bidix ee weerarka, waxa Abraham kasoo caawin doona Callum Hudson-Odoi.
Shaxda Blues ee xili-ciyaareedka 2020/21 haddii uu Coutinho yimaaddo Stamford Bridge”